Maitiro ekuvandudza kweApp ekutarisa muna 2019 - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Anokudziridza App, maitiro ekuvandudza maitiro
Maitiro ekuvandudza eApp ekuti utarise mu2019
Tekinoroji iri kuramba ichikura. Mazuva ano nhare inowedzera isu semunhu. Funga nezvayo isu tinoshandisa uye tinotsamira pane edu mbozhanhare kune; kwete yekungotumira meseji asi yekutsvaga email, kugadzirisa shamwari pamapuratifomu akasiyana, kutarisa mavhidhiyo, kushanda, kufungisisa, rondedzero yacho hombe. Gehena, isu tiri kutotarisa mafoni edu tisati tatsvaira meno sechinhu chekutanga kuita mangwanani!
Iyo indasitiri yemafoni inogona kusimudzira nemamwe matsva uye ari kufambira mberi mafoni ekushandisa maitiro mu2019 ayo anogona kukanganisa maitiro atinoenderera mberi nekudyidzana nemaoko edu uye nezvimwe zvinotakurika zvigadzirwa.
Nekuvaka iyo Mobile Anwendung nezve mafambiro azvino, iwe unogona kugutsa vatengi 'zvinogara zvichichinja zvido nemakwikwi emusika.
Ngatitarisei pane iyo yakanakisa nhare mbozha kuvandudza kwesarudzo maitiro e2019:
1. Cloud yakavakirwa maapplication
Netekinoroji uye mashandiro ari kuwedzera mukurumbira, kune rimwe dambudziko kune inowanzo chengeterwa nzvimbo yekuchengetera pane mafoni.
Mazuva ano mafoni ekuvandudza mashandiro anokurumidza kugadzirisa gore manejimendi. Aya mafambiro anoita kuti zvifungidzirwe kushandisa dhata zvakanyanya zvisingaite izvo zvisingashandise memory yemukati yefoni. Pakati peanonyanya kuzivikanwa makore ekushandisa ndeye Dropbox neGoogle Disk. Asi mushure mavo, nhamba inokura yemainjiniya inotanga kushandisa iyi tech.
Seizvo zviremera zvinocherekedza, kunyorera kunoenderana negore komputa kwakakosha kubva pakuona kwekuchengetedzwa kwedata. Izvi zvakakosha kune vatengi vemakambani vanotya kutyorwa kwedata. Segore rakachengetedzwa, ruzivo rwemunhu wega rwevashandi vemakambani runochengetedzwa kubva kutyisidziro.
2. Instant maapp
Instant zvishandiso zvine hunyanzvi nyowani tekinoroji yeGoogle yakavapo kubva 2016.
Aya marudzi ekushandisa anoita kuti vashandisi vashandise iko kunyorera kuburikidza neGoogle Play chitoro zvinoreva kuti hapana chikonzero chekurodha pasi nekuisa iyo yakazara application. Uku kukura kunoita kuti mushandisi aongorore mashandisiro acho nekukurumidza pasina kushandisa chero nzvimbo pane ndangariro ye smartphone.
Kunyangwe iri pfungwa ingangoita nyowani, kunyangwe isu tichigona kutarisira zvakanyanya kuwedzera kuvandudzwa nekuvandudzwa kwezvishandiso zvirimo mukati megore rino zvichipa kukurumidza uye zvishoma nezvishoma kurongeka kubatanidzwa kune vashandisi.
3. Zvirongwa zvekupfeka
Nepo akanyanya kushandiswa zvakanyanya ari smartwatch nemawristband, iyo hunyanzvi iri kuenderera ichipararira kune akasiyana zvigadzirwa, semuenzaniso, akangwara magirazi, shangu, uye mbatya.
Iyi buzzing maitiro inosanganisa ese ari maviri nhamba yemidziyo inoshandiswa kuchengetedza hupenyu hune hutano, kureva, smartwatches uye vateedzeri vemuviri uye izvo zvakagadzirirwa kuongorora huturu hwevarwere vasingaperi - cholesterol, shuga yeropa, uye pulse metres.
Yese gadget inopfeka inofanirwa kuwiriraniswa nemaapplication anoshanda pane nhare. Zvekushandisa kwehutano uye kugwinya, zviri pachena kuti upe ruzivo rwako rwese mukati mekusvikira iri smartphone. Nenzira iyi, akawanda anopfeka zvishandiso anofambidzana neye mobile app, iyo inoratidza kuti kudiwa kwe mobile kuvandudza kwesarudzo yezvokupfeka zvinokwira kumusoro muna 2019.
Iwo ma beacons tech uye nzvimbo-yakavakirwa manejimendi ndeaya mafomu ayo ari kupararira kwese kwese kwakamira kwakasiyana pakati peindasitiri senge mahotera, maresitorendi, zvitoro, mabasa ekurapa, mitambo, zvichingodaro.
Parizvino, mabhikoni matsva ari kuputika. The Mobile mafomu yakagadzirwa nekushandisa mabhekoni tekinoroji inokurudzira kuwedzera kwakakosha mashandiro ayo anozogoverwa zvakare se data, semuenzaniso, madhiraivha chaiwo.
MaBeacons tech ndeimwe yeanouya matsva e2019 ayo anozokanganisa iyo yese nhare yekushandisa indasitiri.
5.Kushandiswa kwe blockchain muma mobile apps
Zvishamiso zvekuwanikwa kweBlockchain zvakatanga kuenda pasi peyekucherechedzwa kwemunhu wese nemusika we cryptocurrency, uye izvozvi BFSI iri kutarisira kunamatira kwechengetedzo neiyi inoshamisa hunyanzvi.
Kubva pane kudzora kusvika kumagadzirirwo uye kuchengetedzeka, hunyanzvi uhu hwakarongerwa kugadzirisa bhizimusi indasitiri. Icho chinhu chaunofanirwa kufunga nekutaurirana nharembozha kuvandudza kwesarudzo sangano raunosarudza uye wedzera zvayakanakira munzvimbo dzakasiyana siyana dzaunopa.
Sezvinoratidzwa ne nzvimbo yekutsvaga, yepasi rose yeBlockchain yakaparadzirwa ledger inofanirwa kugadzira ingangosvika madhora zviuru mazana mashanu nemazana mana nemakumi mana nemakumi maviri nenomwe.
6.Ipamberi Yakawedzera & Yechokwadi Virtual
Nharembozha maapplication anonyatso shandisa iwo epamberi maficha eanomira emagetsi, semuenzaniso, avo asina kufananidzwa makamera. Iwo makamera anofamba achienda kuve windows kupinda mune rakazara rakazara nyika kana hupenyu kune iyo chaiyo uye chaiyo mufananidzo ine mubatanidzwa.
Virtual chaiyo uye yakawedzera chokwadi vabuda kunze kwenzvimbo yemitambo uye vari kuve vachidzidzisa mapuratifomu, dhizaini showroom, eCommerce zvishandiso, uye nzvimbo dzemusangano.
ne rakapotsa chokwadi, shopu munzvimbo yekutenga chaiyo kana vanhu vanogona kuyedza-kutyaira mota nyowani, uye kunyangwe timu yepasirese inogona kubata musangano munzvimbo chaiyo.
ne Augmented reality, chiremba anogona kuratidza x-ray yemurwere akananga pamusoro pemuviri wavo achivhiya, saka zvinogara zviri pamberi pemaziso avo.
Virtual uye Augmented reality iri kubatana mune angangoita mabhizinesi ese, ayo, kazhinji, anoita mukurumbira wekusimudzira mbozha VR uye AR application.
Nhare mbozha dziri kuenderera mberi kugadzirira kuwedzera kushandiswa muVR neAR. Ose Apple neGoogle vakaparura maVR neAR ekuvandudza mapakeji - ARCore yeApple mu2018 uye ARKit yeIOS muna2017.
7. Artificial Intelligence uye Machine Kudzidza
Ngatitaurei kuva vakatendeseka; chakagadzirwa Intelligence chimwe chinhu kunze kwechimwe kushamisika munguva ino. Sezvinoratidzwa neInternational Data Corporation, inoongororwa kuti musika weAI uchave uri pamadhora makumi mana emadhora kusvika 40. Zvinotaridza mamwe matunhu ari kutarisa kuti tekinoroji ibatanidzwe nekunzwisisa kwevanhu.
Kusvika parizvino, ekugadzira uye ekurapa zvikamu zvakatora matanho anoshamisa ekuvandudza hunyanzvi kuburikidza neAI. Izvi zvinodaro nekuda kwekukwirisa kwepamusoro uye kugona kubata zviitiko chaizvo-zvenguva.
Iyi inotevera nzira iri kubuda mune ino runyorwa rwe mobile kuvandudza kwesarudzo mafambiro e2019 ayo anozoita kukanganisa kwayo ndeye ye-in-app yekutsvaga ficha iyo yakafambira mberi zviri pamutemo muApple maapplication. Chaizvoizvo, uku kufambira mberi kune iyo YeMushandisi Chiitiko (UX) modhi yekushandisa.
Fungidzira, iwe unofanirwa kutarisa kune imwe yakatsvaga mhedzisiro mune yakatarwa kunyorera panguva iyoyo iyo-yekushandisa yekutsvaga sarudzo ichakubatsira iwe nekuita kuti iyo yekutsvaga ikurumidze uye nyore. Iyi nhare kuvandudza kwesarudzo nzira ingangozopedzisira yakosha muna 2019 sevashandisi vekupedzisira parizvino vanoda imwe application kuti vaite akasiyana mabasa panguva imwe chete.
Makambani maviri ane mukurumbira akagamuchira zvinobudirira chinhu chitsva ichi Spotify neYouTube.
9. Nhare yekubhadhara kubatanidza
Iwe unobvumirana here kuti makadhi ari kutanga kuve asina maturo kubvira panguva yekubhadharisa nhare kwavapo? Nhare dzedu dziri kuramba dzichishandurwa kuita zvikwama zvedu, zvakare.
Nharembozha dzemabhengi manejimendi dziri kuchinja mamiriro emabhizinesi emari. Uyezve, online shopping iri kuve nemukurumbira. Iyo inogara ichiwedzera nhamba yevatengi vari kutenga kuburikidza nekushandisa kwavo nhare. Iyo inokurumidza, yakapusa uye inofambira mberi nzira yakachengeteka yekushandisa mari.
Kuzivikanwa kwem-m-wallets kuri kusimuka, uye isu tinofungidzira kugashira iri kuwedzera nhamba inoshamisa yemasevhisi masevhisi echinangwa chekubhadhara gore rino.
10. APM neEMM
Iyo mobile application kuuraya yakanyanya kutsoropodza nekuti vashandisi havanyatsoda mafomu ane mashoma kumhanya, mashandiro, uye mhosho. APM - Chikumbiro Performance Management yakabatanidzwa muGoogle mugore ra2016 kubatsira kuitisa kunyorera nekudzima iyo snug uye dzakasiyana nyaya dzinogona kutadzisa kuita kwechikumbiro.
Icho chiri pakati pezvakanyanya kukosha mobile application performance metric iyo inoshandiswa nevashandisi vekushandisa uye testers zvese. Izvo zvinonyanya kubatsira kuitiswa kwese kwekushandisa uye inopa vashandisi nguva yakanaka. Kuita kwepamusoro kunoreva kuwedzera nguva pachikumbiro icho pakupedzisira chinozadzisa chinangwa chebhizinesi.
EMM - Enterprise Nemaoko Management inopa simba vashandi mukati mekambani kuti vashandise Mobile mafomu kusimbisa kuchengetedzeka uye kusimudzira kuita kwakawanda nekugadzirisa uye nekubatanidza nzira dzebhizinesi mukushandisa. Vamiriri vanogona chip kure nemabasa kubva kunharembozha pachayo inopukuta kuvimba kwenzvimbo yebasa.
AMP uye EMM mafambiro ari pachena kuti anozopedzisira ave sadza mune ramangwana risingadzivisike sezvo ivo vachiwedzera kuita kwakawanda uye kuita kuti vape zvakafanana kune vashandisi.
11. Kudzivirirwa Kwekushandisa
Kuchengetedzwa kwepamhepo kunowanzo kuitika uye kunofanirwa kuve. Software yakaipa iri kuramba ichiva nenjodzi. Zvakare, makore zvaari kupfuura, zvinokurudzira zvinowedzera zvakaoma kuti ubudise misungo ingangoitika uye ugare kure nekudonha kwedata.
Mapurogiramu enhare anochengeta gigabytes yeruzivo rwakadzama. Nharembozha dzedu dzinoziva nezvedu kupfuura chero ani zvake. Saka, zvakakosha kuchengetedza ruzivo urwu. Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchingerwa data revatengi vako, iwe unofanirwa kuiona yakakosha uye chenjerera nharembozha kuvandudza kwesarudzo maitiro muna 2019 achivavarira kupa simba kuchengetedzeka.
12. On-kudiwa maapplication
Chii chaimbove chichinzi sebubble risingadzivisike mudura renhare kuvandudza kwesarudzo, parizvino ndeimwe yemafambiro ari kubuda. Musika wepa-inodiwa unozadzisa kudiwa kwevatengi nekukurumidza, uchigonesa kuwanikwa kwezvinhu nemasevhisi.
Nemabhizinesi kubata iyo-yekuda chirongwa chekuita, mumwe anogona kutarisira UI / UX kugadzirisa, predictive analytics, mCommerce services, uye mabhizinesi bots, kuti akurumidze kuvandudza kweUber-for-X kunyorera mugore ra2019.
Vanoda rubatsiro neako Mobile Apps? Bata nhasi